Huawei Watch Fit Elegant - tallaabada ugu horreysa ee fasalka ganacsiga | TeraNews.net
qoraaga Kravetz Pavel La daabacay 19.03.2021
Waxaa laga soo farsameeyay birta birta ah ee dhalaalaya, Huawei Watch Fit Elegant waa hagaha sumcada Shiinaha. Iibsadayaashu waxay muddo dheer ka sugayeen wax sidan oo kale ah shirkadda Huawei. Laakiin walxaha cusub oo dhami waxay ahaayeen kuwo si carruurnimo ah oo aan macquul ahayn.
Huawei Watch Fit Elegant - waxaad u baahan tahay xarrago iyo maal
Xilliga ugu wanaagsan ee ugubnimada waa saldhigga birta ee saacadda. Waxay ahayd mid mudan in lagu beddelo caaga birta birta ah iyo smartwatch isla markiiba ayaa loo beddelay. By the way, soo saaraha Huawei wuxuu soo bandhigayaa inuu iibsado 2 nooc isla markiiba - lacag (Midnight Black) iyo dahab (Frosty White). Uma urinayso macdano qaali ah wali, laakiin muuqaalka ayaa si weyn isu badalay. Haddii arrimuhu sidan ku sii socdaan, markaa annaga, ugu dhakhsaha badan, waxaan arki doonnaa smartwatches leh platinum ama dahaadh dahab ah.
Xiriirinta daciifka ah ee Huawei Watch Fit Elegant waa suunka. Ha soo-saaruhu noo ballanqaado iska caabin fidinta, saliidda, heerkulka. Laakiin muuqaalka suunka saacaddani wuxuu u xaqiijinayaa iibsadaha in tani ay tahay aalad miisaaniyadeed oo caadi ah. Saacaddu waa qaali - suunku waa cabsi badan yahay. Huawei wuxuu si deg deg ah ugu baahan yahay inuu soo saaro suumano maqaar qabow iyo jijimooyin bir ah. Haddii kale, fasalka ganacsiga wuxuu dhaafi doonaa Shiinaha.
Huawei Watch Fit Elegant - waa maxay maxay
1.64-inch oo shaashad ah AMOLED shaashad wuxuu ku darayaa hodanka smartwatches. Iyo sidoo kale xallin shaashad habboon - 280x456 pixels. Badhanka weyn ee keli ah ee dhinaca ku yaal ayaa u muujinaya adeegsadaha halista buuxda ee qalabka.
Saacadaha Smart-ka ah ee Huawei Watch Fit Elegant waxay leeyihiin Huawei Lite system-ka ay ku shaqeeyaan waxaana loogu talagalay 12 maalmood oo qalliin ah hal batteri oo keliya. Saacaddu waxay leedahay aaladda GPS-ka oo la dhisay, dareemayaal garaaca wadnaha ah iyo go'aaminta heerka oksijiinta dhiigga ku jirta. Waxaas oo dhan waxaa lagu kaabayaa noocyada caadiga ah ee saacadaha jimicsiga, oo ah qaab barnaamijyo tababar ah. Saacaddu waxay awood u leedahay inay la socoto wareegga caadada iyo hurdada, iyadoo la sameynayo kormeer saacad kasta ah.
Qiimaha bilowga ee smartwatches waa $ 150 (horeyba suuqa Yurub). Kharashka ku baxaya gobolada kale, oo ay ku jirto Shiinaha, weli lagama hadlin. Bilawga iibka waxaa loo qorsheeyay Maarso 26, 2021.